कुनै पनि सवारी साधनलाई करिब १ हजार ७५० किलोमिटरको यात्रा गर्न कति समय लाग्ला ? गाडीको क्षमता अनुसार बढीमा ३ दिन । तर के कुनै पनि सवारीलाई यो दुरी पार गर्न १ वर्षभन्दा बढि समय लाग्ला र ? – Naya Kura Daily
July 24, 2020 198
कुनै पनि सवारी साधनलाई करिब १ हजार ७५० किलोमिटरको यात्रा गर्न कति समय लाग्ला ?
गाडीको क्षमता अनुसार बढीमा ३ दिन । तर के कुनै पनि सवारीलाई यो दुरी पार गर्न १ वर्षभन्दा बढि समय लाग्ला र ? पक्कै लाग्दैन किनकी कोहि पनि मानिस हिडेर पनि जान चाह्यो भने यो दुरी पार गर्न लगभग ५०/६० दिनको समय पर्याप्त हुन्छ ।
तर भारतमा भने एक सवारी साधनलाई करिब १ हजार ७५० किलोमिटरको दूरी पार गर्न एक वर्षभन्दा बढि समय लागेको छ ।
भारतको महाराष्ट्रबाट केरलाको दुरी १ हजार ७५२ किलोमिटर छ । यो दूरीलाई पार गर्न एक ट्रकले एक वर्षभन्दा बढि समय लगाएको हो । खासमा एक भारी मेसिन बोकेर महाराष्ट्रबाट केरलामा डेलिवरी दिन हिडेको ट्रकले यति लामो समय लगाएको हो ।
एक स्पेस प्रोजेक्टसँग जोडिएको मेसिनलाई लिएर महाराष्ट्रबाट अघिल्लो वर्षको जुलाई ०८ मा हिडेको ट्रकले सोमबार मात्र केरलाको तिरुवनंतमपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेन्टर (वीएससीसी) मा यसको डेलिवरी दिएको छ ।
मेसिन बोकेर हिडेको सो ट्रकले यस अवधीमा ४ प्रदेशको यात्रा गरेको थियो । आइतबार केरला पुगेको उक्त ट्रकले सोमवार स्पेस सेन्टरमा डेलिवरी दिएको हो ।
वीएससीसीले एयरोस्पेस हरिजोन्टल अटोक्लेव मेसिनको अर्डर दिएको थियो । जुन मेसिन बिना वजनको पदार्थ बनाउन प्रयोग हुन्छ । उक्त मेसिनको वजन मात्र ७० टन भन्दा बढि थियो । यसको उचाई ७ दशमलव ५ मिटर रहेको थियो भने चौडाई ६ दशमलव ५ मिटर रहेको छ ।
यो मेसिनको वजन र यसको आकारको कारण यसलाई पुर्याउन यति धेरै समय लागेको हो । उक्त मेसिन मेसिन महाराष्ट्रको नासिकमा बनाइएको थियो ।
Prevभाटभटेनीलाई तीन लाख जरिवाना
Nextवीरगञ्जमा मृत्यु भएकी युवतीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि